Elegharala Nnabata, Ndakọrịta, na Ezi Mmemme | Martech Zone
Ọ bụrụ na m ga-emepụta ngwa site na ncha, enwere ụfọdụ ihe m ga - ejide n'aka na emezuru:
Cascading Style Ibé akwụkwọ - site na nkewa nkeke anya nke ngwa gi site na etiti na azu, i ghaghi eme ihe kariri igbanwe faịlụ ole na ole ka igbanwe onodu ogugu nke ebe nrụọrụ weebụ gi. Ogige CSS Zen na-egosipụta ike nke CSS n'ụzọ dị egwu. HTML bụ otu ihe ahụ na saịtị ahụ, mana ka ị gbanwere n'etiti gburugburu, a na-etinye mpempe akwụkwọ ọhụụ ọhụrụ yana saịtị ahụ gbanwere. M ga-akwadoro ha akwụkwọ.
Na-atụgharị uche - Peeji ndebiri bụ ‘etiti-elu’ n’etiti njedebe gị na ngwụcha ya. Nke a na-ewepụta koodu nnweta ahụ n'ezie na peeji ndị ahụ ma mee ka ọ dee ya na ndebiri. Uru nke ndebiri bụ ha na-enyere ikewapụ ọka wit na ọka. Ọrụ njedebe na-agaghị agbaji arụmọrụ peeji na nke ọzọ.
Koodu ngwa ngwa - ị gaghị enwe ike ide otu koodu ahụ ugboro abụọ n'ime ngwa ahụ. Ọ bụrụ na ịmee, ị na-ede ngwa gị ezighi ezi. Mgbe ikwesiri igbanwe mgbanwe, ikwesiri igbanwe mgbanwe ahu n’otu ebe.
database - chekwaa data na ọdụ data. Chekwa data na akwa ọ bụla ọzọ chọrọ ọrụ ka ukwuu!
XHTML nnabata - dị ka teknụzụ dị ka Sistemụ Njikwa Ọdịnaya, API, RSS, na ngwaọrụ ndị ọzọ na-ejikọ ọdịnaya na-abawanye ụba, nnyefe ọdịnaya kwesịrị ịdị mfe. Kpụrụ XHTML dị mkpa n'ihi na ọ dị mfe 'ibufe' ọdịnaya na saịtị, ọrụ, ma ọ bụ ọnọdụ ndị ọzọ.
Ọrụ nchọgharị - ihe nchọgharị na-emeso HTML na CSS iche. Enwere ọtụtụ hacks nke na-akwado arụmọrụ nchọgharị. Ga na-akwado ndị kachasị elu ihe nchọgharị 3 na ụlọ ọrụ ahụ na mbipụta 3 kachasị ọhụrụ nke ọ bụla. E wezụga nke ahụ, agaghị m echegbu onwe… ọ ga-abụ ọnwụ nke ihe nchọgharị ahụ ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ijide nnukwu nkịta.
Ọrụ cross-platform - ụfọdụ arụmọrụ abụghị otu ma ọ bụ nye n'etiti PC, Mac, na Linux. Ọ bụrụ n’ịme usoro niile gara aga, ịkwesighi ịdaba na nsogbu, mana m ka ga-anwale iji jide n’aka!
Gbalị ịrụzi pọmpụ n'ụlọ a rụrụ arụ na-efu nnukwu ego. Me 'pipụ mmiri' n'ihu n'ihu ga-azọpụta gị nnukwu ego n'ikpeazụ!
Achọtara m nnukwu akụ a na-akpọ Onye nyocha mgbe ị na-agụ blog ọzọ, akpọ Ezigbo Bytes. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ịghọ ngwa ngwa ụlọ ọrụ nwere oke iru na oke, m ga-akpachara anya maka ndị ọrụ na-eleghara ma ọ bụ na-echeghị onwe ha gbasara ihe ndị a n'oge. Choo ndi n'elebara anya! You're ga - adị mfe n ’ụzọ.
Sep 5, 2006 na 4:53 PM
Naanị m gbara ọsọ ule silktide.com wee nweta 7.9, ọbụlagodi tinye bọtịnụ na saịtị m, ekele doug!